Aqalka sare ee Mareykanka oo ka wal walsan in Doorashada Soomaaliya dhiig badan ku daato | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Aqalka sare ee Mareykanka oo ka wal walsan in Doorashada...
Aqalka sare ee Mareykanka oo ka wal walsan in Doorashada Soomaaliya dhiig badan ku daato
Aqalka sare ee Dowlada Mareykanka ayaa ka walaacsan ismari waaga xiligan ka taagan doorashada Soomaaliya, xili uu dhamaaday mudo xileedka Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo walina aan heshiis laga gaarin doorashada dalka ka dhaceysa.
Guddoomiyaha Guddiga Xiriirka Arrimaha Dibadda ee Aqalka sare ee Mareykanka, Bob Menendez, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay ka walaacsan yihiin xiisada siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya gaar ahaan khilaafka ka taagan doorashada.
Bob Menendez, ayaa bayaanka uu soo saaray ku sheegay in cabsi ka qabaan in xiisada siyaasadeed ee taagan in ay isku bedesho khatar dhiig ku daato,waxa uuna sheegay Menendez in khilaafka taagan ii khal khal galinayo xasiloonida dalka.
“Waxaan ka walaacsanahay xiisadda sii xoogeysaneysa ee ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo khatarta dhabta ah ee loogu jiro in uu dhiig ku daato ismariwaaga hadda ka taagan arrimaha siyaasadda. Khilaafka jira ee u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo, hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada iyo mucaaradka Soomaaliya wuxuu halis galinayaa dadaalkii adkaa ee ay dadka Soomaaliyeed usoo mareen horumarka dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha laga gaadhay tobankii sano ee lasoo dhaafay, taasina waxay khalkhal galineysaa xasiloonida guud ee dalka.” ayuu ku yiri bayaanka Bob Menendez.
Guddoomiyaha Guddiga Xiriirka Arrimaha Dibadda ee Aqalka sare ee Mareykanka, ayaa ugu baaqay dhinacyada isku haya siyaasada Soomaaliya in ay ka tanaasulaan danahooda siyaasadeed ee gaarka ah ayna xal ka gaaraan qodobada isku khilaafsan yihiin.
“Anigoo og in Al Shabaab ay raadin doonto fursad kasta oo ay ku abuurto qalalaase siyaasadeed si ay usii waddo ololaheeda argagixiso, Waxaan dhammaan dhinacyada ay arrinta khuseyso ugu baaqayaa inay si deg deg ah uga tanaasulaan tanahooda siyaasadeed ee gaarka ah ayna xal ka gaaraan qodobada ay wali isku khilaafsan yihiin ee la xiriira doorashada, iyadoo aan dib u dhac kale la sameynin. Heshiis walba oo noocaas ah waa in uu salka ku hayaa mabaadii caddaalad ku dhisan ayna faa;iido ugu jirto dimuqraadiyadda xisbiyada badan ee Soomaaliya.” ayuu yiri Bob Menendez.
Dowlada Mareykanka oo kamid ah dowladaha taageera Soomaaliya saameyn xoogana ku leh siyaasada dalka ayaa walaac xoogan ka muujisay khilaafka doorashada ka taagan, waxaana Mareykanka marar kala duwan ku baaqday in heshiis laga gaaro khilaafka jira.
Previous articleLaanta Socdaalka oo soo saartay Saadaasha Qaxootiga iyo helitaanka Dhalashada ee Sanadka Cusub
Next articleGudoomiye Murusal oo Afka qabtay Ra iisal wasare Rooble
Caasimadda gobolka Borno ee dalka Nigeria ayaa lagu weeraray madaafiic hoobiyeyaal ah, wararkuna waxay sheegayaan in 10 qof ay dhinteen dad kale oo bandanna...
Rooble oo fashirka Shirkii Xalay ka dib hadlay oo ku baaqay...